Tenisy – «Can 2018»: vonona ireo mpilalao fa miandry tohana avy amin’ny fanjakana | NewsMada
Tenisy – «Can 2018»: vonona ireo mpilalao fa miandry tohana avy amin’ny fanjakana
Anisan’ny lalao lehibe goavana hatrehin’ny Malagasy amin’io volana novambra io ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika “Can 2018”, taranja tenisy. Efa vonona ireo mpilalao, saingy miandry hatrany ny fanampiana avy amin’ny fanjakana.
Tsy kivy fa mbola miandry ary manantena hatrany ny fanohanana avy amin’ny fitondram-panjakana ireo mpilalao hiatrika ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika “Can 2018”, taranja tenisy. Efa ao anatin’ny fanomanana tanteraka ireo mpilalao hiatrika izany, ary vonona ny hiaro ny voninahi-pirenena.
Fihaonana, hotanterahina any Botsoana, ny 5 ka hatramin’ny 10 novambra ho avy izao. Raha tsiahivina, ny tapakila handehanana hiatrehana izany no mba hany angatahin’ireo mpilalao amin’ny mpitondra malagasy fa tsy mitaky volabe akory izy ireo. 5 tapitrisa Ar ny ilain’ny mpilalao iray hanaovana izany fihaonana izany.
“Efa hatramin’ny ela ny fahavononana, toy izany koa ny fanomanana hiatrehana izany. Mangataka ny hanampian’ny fanjakana anay izahay hiatrehana izany satria voninahi-pirenena ny arovana any fa tsy ho an’ny klioba na ho an’ny tenanay manokana”, hoy Rakotondramboa Miary Zo, iray amin’ireo mpilalao hanao ity “Can 2018” ity. Efa tafiditra ny “visa” ary miandry ny valin’izany sisa ny tenany.
Noho ny filazan’ny federasiona malagasin’ny tenisy (FMT) fa mianto-tena ireo rehetra te handray anjara amin’ity “Can 2018” ity, betsaka ireo mpilalao miala an-daharana ary tsy handeha ho any Botsoana. Anisan’ireny Rakotozafinirina Patrick sy Ramalalaharivololona Nantenaina, tokony hifaninana. Tsy mbola andrenesam-peo kosa Rasolondrazana Jacob na ho anisan’ireo hiady ity “Can 2018” ity na tsia.
Hatreto izany, tsy misy afa-tsy Rakotondramboa Miary Zo sy Radilofe Sariaka ihany ny hany vonona hiaro ny voninahi-pirenena. Zava-dehibe ho an’i Madagasikara ny fiatrehana ity fihaonana ity satria 28 taona aty aoriana vao hiverina hiatrika izany fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika “Can”, taranja tenisy, izany indray ny Malagasy.
Hanainga ny 3 novambra ho avy izao hihazo an’i Botsoana ny delegasiona malagasy.